Mabasa muSaudi Arabia Yakazara Mazita Ezvinoshandiswa Kuzoshandisa 🥇
Basa reHurumende muDubai Yema expats
Yakabudiswa na Dubai City Company at December 26, 2017
Mabasa muSaudi Arabia ndeimwe yezvakanakisa mukirasi. Vatongi vakuru veSaudi vanoziva seimwe yeakanakisa bhizimisi maneja. Muchiedza chekutsvaga basa, iwe unofanirwa kufunga nezveSaudi Arabia. Kambani yedu inonyora zvinyorwa nezve kutsvaga basa muSaudi Arabia. Tiri kuedza kushandira pamwe nezvidimbu mashoma eruzivo nezve nzira yekuwana basa muMiddle East. Kunyangwe izvi zvingave zvechokwadi isu tiri vamwe yakanakira Kurera kuMiddle East maererano nezano renzvimbo yebasa.
Mashoko Anoshamisa nezveMabasa muSaudi Arabia
Sezvakangoitika, Saudi Arabia inyika yeArab. Inowanikwa nzvimbo yakanakisisa kuMiddle East. Nyika yeSaudi Arabia inoshanda kune vazhinji veArabian Peninsula. Saudi Arabia inotarisira nzvimbo ye830,000m2. Kune rumwe rutivi, nyika yeSaudi ndiyo yechishanu huru muAsia. Saka zvakabva pane iyo pfungwa. Unogona tsvaka basa munyika ino zvakare semudzimai wemhuka.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, izvi nzvimbo is for expats. Uye ndiyo yechipiri yakakura nyika yeArab. Kazhinji, nyika Saudi Arabia. Ko huwandu hwevanhu hunofungidzirwa kuve 35 mamirioni ..? Saka mukufamba kwenguva kana iwe uchitsvaga basa. Iwe une mukana wakanaka wekutsvaga basa ipapo. Zvakare zvakare pfungwa yakangwara ichave kubatana neAssApp Groups yedu. Ikoko unogona kuwana kukokwa kanoverengeka kunosangana nezvimwe zvinotsanangura.
Saudi Arabia mashoko
Munzvimbo yepamusoro Saudi Arabia ichiita kuti ive 40th nyika huru munyika yose. Zvichienderana nekuvakirwa kwehuwandu kune imwe nzvimbo yakanaka yekuvhima basa. Nokukurumidza kana kuti gare gare mamwe mabasa emaOiri anobva kuApp Companies. Chimwe chinhu chinokosha cheSaudi Arabia. Primary work and living group is Arabic. Uye zvechokwadi, chitendero chikuru chiIslam.
Uchifunga izvi, Hurumende yeSaudi is 100% Islam. Uye parutivi rwakashata, imhedzisiro yemongi. Na mambo pamwe korona muchinda kuwedzera nemutevedzeri korona muchinda. Nekutarisa mari, mari ndeye Riyal. Semuenzaniso werudo kuna Allah. Hakuna mumwe Mwari asi Allah uye Muhammad ndiye Mutumwa waAllah. Iyo mureza weSaudi Arabia inogadzirwa mumhando dzegirini nechena. Saka nzvimbo ino ndeimwe iyo yakanakisisa yevanotsvaka basa.
Saudi Arabia Makambani kuMiddle East
Nzira yekushandira sei basa muSaudi Arabia?
Kuti uise imwe nzira, kambani ino inowanzonzi ATCO. Company ATCO yakarongeka chaizvo uye expat orientated bhizimisi boka. Somuenzaniso, kambani iri muDammam muSaudi Arabia.
Zvakakosha kuziva kuti Atco iri kushanda kubva kuI1950s. Uzhinji huchapupu hwakasimba hwokuti kambani inokosha kuwana basa iri nyore. Iyo kambani yakakwana yaAbdulrahman Ali Al-Turki. Pamusoro pezvakanaka kwauri semutsvaga webasa. Nezvozvi mupfungwa, boka reA ATCO rine makumi maviri nematatu bhizinesi dzakasiyana zvakasiyana mu Saudi Arabia. Inofanira kuyeukwa kuti kambani inotarisira zvikwereti zvikuru kuMiddle East. Kazhinji kutaura, kambani inoshandiswa pamakambani ekubatana uye standalone nevamwe Dubai Companies.
Kupfupisa pfupisa AA Turki Boka zviitiko zvinoenderana nezvikamu zvakawanda zvebasa. Kwezhinji chikamu, kambani ichiwana vashandi mabasa akanaka. Muchidimbu kutengeserana nebasa rekuvaka muMiddle East. Mabasa mukutengesa uye masevhisi eIT muSaudi Company inzira yekukunda mutambo. Nguva nenguva iwe unogona kuwana blog yebasa mikana.
ATCO inosanganisira 23 kugoverana, masangano akabatana, uye makambani oga-oga. Boka rinopa mikana yakasiyana-siyana yemabasa ekutsvaga. Kusanganisira chimwe chezvinhu zvakanaka zvinotevera:
Mafuta & Gesi Products & Services
Inonyanya kupemberera kubudirira nyaya muMiddle East. Abdulla Fouad Group (AFG) yakatangwa muZ1947 muRas Tanura, Saudi Arabia. Kubva panguva iyo inokura zvakanyanya zvokuti mabasa ose anotsvaka. Zvechokwadi uchava nemukana kuwana basa ipapo mune MBA.
Tichifunga izvi aya kambani kutanga sekambani diki yekuvaka muMiddle East. Asi mu kuongorora kwekupedzisira kwekuvandudzwa. The Dubai company nhasi iboka rezvakasiyana-siyana zviitiko mukugadzira mabhizimusi mikana.
Zvimwewo kambani yeinjiniya ine ruzivo rwakadzama rwemuchina. Ehe pamwe chete nezvivakwa inivhesitimendi bhizinesi. Iyo kambani zvakare ine hombe HR uye yekudyara uye yezvokutengeserana zvikamu muSaudi Arabia.
Kune rimwe divi bhizinesi rechinzvimbo ra Abdulla Fouad. Iva akakurumbira mukurumbira muMiddle East. Muchokwadi, kambani ine makambani mazhinji uye zvikamu. Saka simbisa pane izvo iwe zvaunogona tumira CV yako kune iyi Dubai Company mu2018.
Ikambani inotarisira vashandi muMafuta neGesi. Uyezve, Industrial and Construction mabasa vacancies ngawanike paIndaneti. Boka reAFG kwete chete kuunganidza for Healthcare Consumer & Real Estate asi zvakare for Investment career. Iyo kambani inotarisawo vatariri vevatungamiri muNhau neZvikombiki.
Iyo kambani inoiswawo pakati pemakambani epamusoro e100 muSaudi Arabia. nenyaya yechokwadi AFG Group sevhisi nzvimbo munzvimbo dzese muKumambo kweSaudi Arabia. Kazhinji, kambani ine network yemahofisi ekutenga zvinhu muUnited States, Europe, neAsia.
Mabasa muSaudi Arabia - Abulla Fouad.
Dubai Kambani sangano rakashomeka rezvikwereti muSaudi Arabia. Kunyangwe izvi zvingave zvechokwadi kambani yaive kutanga kuitirwa mu1988.
Kune rimwe divi, AEC inyanzvi muhunyanzvi hunyanzvi. AECL inopfuura yekutsvagisa kwemagetsi zvemagetsi nekugadzira kambani kuMiddle East. Nezve izvi mupfungwa kambani kunyorera zvikamu zvekudzivirira uye kutaurirana zvikamu muSaudi Arabia.
Pasi pemamiriro ezvinhu aya, chinangwa cheAEC ndechokuva chimwe chezvakanakisisa. Kazhinji kutaura mumunharaunda mazano uye nzvimbo dzakakosha. Sezvakave zvichinzi kambani yakafambira mberi hutsva hutsva mukugadzirwa kwekombiyuta uye maitiro ekukurukura Iyi kambani kuhaya Indian expats. Saka kana uri Indian expat iwe unofanirwa kutumira CV yako.
Kune chikamu chikuru, kambani imwe yezvakanakisisa mubatsiro rekushandisa. Iyi kambani inoshamisa mu2006 yakasaina chibvumirano chinofadza. Dubai Company yakachengetedza chibvumirano chitsva neAcer. AECL inova yekugadzira makombiyuta avo kuMiddle East. Uye iyo inova purojekiti itsva yechikamu chehurumende yehurumende yeSaudi yekuita kuti PC dzitengese kuhuwandu hweSaudi Arabia.
Mabasa muSaudi Arabia - Advanced Electronics Company.
Batirana nekambani yeKambani nhasi. Sezvineiwo. kana uchitsvaga basa kuDubai. AH ALGOSAIBI & BROS. Iyi bhizinesi reSaudi Arabia rakabudirira makore mazhinji kumashure. Panguva imwecheteyo, iyi Kambani yeSaudi inotanga nevanhu vasina kujairika manejimendi. Kune rimwe divi iro Middle East sangano rinopa ungwaru, unyanzvi hweGCC Countries. Uye makuru epurojekiti masevhisi kwete chete kune GCC vatengi. Asi masevhisi avo anosanganisirawo Dubai City.
Uri Expat Kutsvaga Basa in Saudi Arabia? Ahmad Hamad Al Gosaibi & Hama, muchokwadi, zvichakupa iwe zvinoshamisa basa mikana muHumambo hweSaudi Arabia. Panguva imwecheteyo, unogona kunyorera yako CV yakagadziridzwa. Uye uchifunga izvi. iwe unogona kuve nerutsigiro rwebudiriro yebasa mumikana yese yakaoma.
Kambani kuisa kukosha kwakanyanya wese anotsvaga basa anozobatana nebasa rekuvaka. Imwezve pfungwa yakakosha ne Ahmad Hamad Al Gosaibi & Brothers kambani tsika dzebhizinesi nehunhu. Padivi rakanaka, kunaka kweumwe neumwe nekusimudzira basa mukati mekambani rakakosha munyika yeArabic.
Iyo kambani ine mubayiro uye kubvumirwa kumativi ose eGCC Countries. Pasi pemamiriro iwayo, kambani kuisa vatungamiri vekutsvaga. Uye pamwe nekambani iyi, unogona kuvaka uye kutevera zvido zvako zvemabasa muSaudi Arabia bhizimusi renyika. Nokuda kwechikonzero ichi, unogona kubatana neboka revashandi vekambani uye kutora bhizinesi kuenda kune imwe nhamba.
Mukupedzisira kuongororwa, kambani iri kushingairira vachitsvaga matarenda epamusoro evatarenda vari kutsvaga basa muSaudi Arabia. Iwe unogona kunyorera zvisina kunanga kune yavo email kero.
Mabasa muSaudi Arabia naAhmad Hamad.
Kunyangwe izvi zvingava zvechokwadi ivo vanoshumira zvokudya zvakanakisisa muguta. Nekambani ye ALBAIK unogona kuwana kushandiswa kwevashandi uye vatungamiri basa rekuita mikana mabasa. Nokuda kwechikonzero ichi, kambani inofunga kuti nhengo dzeboka ndiyo inonyanya kukosha mubhizinesi rekudya.
Nokuda kwechikonzero Al Baik Restaurants & Bars. Yakagadzirirwa kuvaka sangano kwete chete kuvashandi veSaudi asiwo Vanotsvaka India nePakistan. Pasi pemamiriro ezvinhu aya tsika yekubatana pamwe nekuremekedzana. Kubatsira marudzi emarudzi ose kushanda pamwechete.
Kazhinji kutaura izvi mupfungwa iwe unogona kukurudzirwa kubva pachinzvimbo chepamusoro kune mukuru wepamusoro wepamusoro. Mukufamba kwenguva, kambani inopa mumwe nomumwe nhengo yedare iyo inobatsira kuwana kukurudzirwa mukati megore. Sezvakaratidzwa nezvose zvakatsigirwa zvaunogona kuwana nekambani iyi.
uye kuwana mikana yemabasa kukudziridza uye kukura pachako pamusoro The Kingdom of Saudi Arabia basa musika. Saka kupfupisa kushanda nekunyanzvi neAl Baik Mahara & mabara kuti uwane izvo zvizere kugona ndiyo kiyi yebudiriro yako.
Mabasa kuSaudi Arabia neAl Baik Restaurant.
Al Bilad Bank kuSaudi Arabia
Nokukurumidza kana kuti gare gare nemabasa ako okutsvaga mamwe mabasa. Iwe unofanirwa kuva nekutarisa Bank Albilad iSaudi Arabia. Kutanga, neruzivo rwekuti bhangi iri rakabatana masheya kambani. Kazhinji kutaura, Al Bilad Bank yakagadzika vide Royal Decree ine hofisi yemakambani ye5,000,000,000 Saudi Riyals. Kuti inoita kambani yakanaka kwazvo kushanda nayo.
Bhizinesi reAlbilad sebhizimisi rebhangi rinoda kuwedzera kwose kweSaudi Arabia. Sangano rinotanga matavi mumaguta mashoma matsva uye nzvimbo. Pasina kunonoka kuwedzera kune vashandi vemuSaudi Arabia kambani inopa matavi evakadzi uye mabhizinesi emitambo. Saka munhu wese anogona kushandisa maitiro avo.
Zvichipiwa izvi, Bank Albilad inopa mavhisi kune vatsva. Uye inotsvaga muSaudi Arabia inogona kushandisa zvishandiso zvebhengi nemasevhisi pamatunhu ose uye zvikamu. Panguva ino, unogona kutarisira mikana yakawanda yemabasa. Kutanga mabasa mumabhizimisi emari uye basa rinotsvaga muRektare yebhengi yemari. Vose pamwe chete nemari yekutsvaga mabasa muSaudi Arabia.
Mabasa muSaudi Arabia neAl Bilad Bank.
Al Faisaliah Boka rimwe re nzvimbo yakanakira basa. Kambani yeSaudi pachivande-inoitirwa kuMiddle East. Nechinangwa chebhizinesi, kambani yekukura inova yakawanda-bhizinesi boka. Kuzviisa zvakasiyana, mune iyi nyaya, iyo kambani musoro uri muSaudi Arabia uye kubatira Middle East. Chinhu chekutanga chekuyeuka kana iwe uchinyorera kutengesa uye marketing jobs muSaudi Arabia. Muzhinji kuti kambani yeSaudi Arabia yakavambwa mu1971.
Pamusoro pezvakanaka, Al Faisaliah Group kubata chinzvimbo chinotungamira mukati mevatsvaki vebasa mune Zvekudyara & Bhizinesi reChikafu. Iyo kambani inowanzo kukura mumagetsi eElectronics & Systems kuMiddle East. Nechikonzero ichi, iwe unogona kuwana basa muhutano nehutano hwekudya. Kazhinji kutaura, boka racho inozivikanwa mudunhu reGCC.
Mukufamba kwenguva, inyanzvi yeboka rekutarisira. Nguva dzose anofara kukupa ruoko nekutora rubatsiro. Uye hurefu hwayo hwekudyidzana nekudyidzana mafambisi epasi rose zvechokwadi ikubatsire kuwana Mabasa muRiyadh. Kwezhinji chikamu, kambani inosanganisira Sony, Danone, Philips, uye Acenture.
Mabasa muSaudi Arabia neAl Faisaliah Group.
Riyadh Zuva Nezuva muSaudi Arabia
Pane chiyero, edza kuwana basa mupepanhau. Basa mune midhiya inova yepamusoro notch yevateveri veSaudi. Riyadh Mazuva ese rakabudiswa neAl-Yamamah Press Establishment. Tichipiwa aya mapoinzi kambani ndiyo yekutanga Chirungu inoburitswa zuva nezuva kubva kuguta guru reSaudi.
Pakupedzisira kana iwe uchitsvaga basa mune midhiya nekutaurirana. Ndokumbirawo uwedzere kutenderera kune hanzvadzi yavo yekuburitsa midhiya, Al-Riyadh Arabic pepanhau. Sezvineiwo, Riyadh Mazuva ese ane nhoroondo refu muiyo Kingdom media indasitiri.
Riyadh Daily nguva yekutanga mukambani yenhoroondo yakaburitsa runyorwa rwemitambo muma1960s isati yagadziriswa kuva renhepfenyuro mu1985. Iwe unogona kuwana zvakare kuwana vashoma recruitment agencies muDubai avo vari kunyorera iyi kambani.
Mabasa muSaudi Arabia neRiadh Zuva nezuva.
An Al Tazaj muSaudi Arabia
Restaurant muBuraidah, imwe yeiyo mabasa akanaka pane dzimwe nyika. Muchokwadi, neiyi indasitiri maresitoreti Yakatangwa 1989 pamusoro 28 makore apfuura. Uine izvi mupfungwa, iwe unofanirwa kuedza kuwana basa nekambani iyi. Vazhinji bhizinesi rebasa vacancies mukati meiyi kambani.
Kana iwe uri expat kazhinji uchitaura tsika kuvapo yakanaka nzira yekutsvaga basa. Mukumberi basa rekudyara pfungwa dzinoberekerwa munharaunda dzeGCC nyika. Kutanga nemabasa muSaudi Arabia unofanirwa kutumira CV yako. Unogona kuwana basa kuMiddle East. Isa chakozve kune ino kambani kuGCC.
An Al Tazaj restaurant inogamuchira CV yezvizhinji nzvimbo kubva international marketing marketing job seekers. Kumashure kunyanya mabasa anowanikwa ekutengesa uye counters chinzvimbo. Kusvikira kunguva iripo send CV kana iwe uri kufarira junior uye vakuru nzvimbo zvinzvimbo.
Mabasa muSaudi Arabia neAn Al Tazaj.
ALDREES Petroleum uye Transport Services Company
Zvakakosha kuti uzive iyo ikambani yeSaudi yakabatana. Kupiwa idzi pfungwa kuwana basa idzva nekambani hombe yemafuta ibasa rakabhadharwa chaizvo muSaudi Arabia. Kusvikira panguva ino kambani iri kuita reta sevhisi uye ive yakawanda-zvigadzirwa zvekutakura zvinhu sangano munzvimbo yeGCC.
Sezvakangoitika, kambani yacho inozvipira pakupa michina yehutano muSaudi Arabia. Kune rumwe rutivi, sangano iri rinopinza rinotanga mapurani ega ega nehurumende pamwe nemakore e bhizinesi kuMiddle East.
Nezvo, mupfungwa, kukura kwakasimba mukati mekambani kunobvira kuSaudi Arabia. Kwemakore akapfuura vanobudirira vatongi vanobudirira nekambani iyi kusvikira nhasi. Iyi kambani zvakare kuunganidza Philipino basa vachitsvaka. Saka, zvakakosha kuti tishanyire chikamu chekushandira pawebsite.
Mabasa muSaudi Arabia nePetroleum uye Transport Services Company.
The company iboka rakasarudzika remakambani emakambani anogara muSaudi Arabia. Padivi rakanaka, kambani yakavambwa mu1943. Kusvika parizvino Abdul Kadir Al Muhaidib ari kambani yakanaka yekushandira. Kuisa imwezve nzira, Sachigaro A. wezvino MuDare weBhodi reVatungamiriri ndiSulaiman A. Al Muhaidib.
Chinhu chokutanga chokuyeuka kukosha kwekambani iri kutengesa zvinhu zvekuvaka zvizhinji. Kuti iise imwe nzira, kambani inotengesa zvokudya zvekudya zvinodhura nekuparadzira mucheri muSaudi Arabia.
Ukuwo, rumwe rutivi rweSaudi Arabia rwakaramba rwuri bhizinesi rekushandisa mabasa vacancies muboka reSouth Africa. Panguva imwecheteyo, kambani yakabvumira kuwedzera bazi rayo rekunyorera muGCC. Padivi rakanaka, kambani yefodhi inosanganisira mamwe zviyo. Uye pakupedzisira, boka rekambani timu rinotungamira pakugadzwa kwetairesi inoburitsa muHumambo hweSaudi Arabia. Kuti nditi kutaura chinhu cheGiant Stores (yakazobatanidzwa nePanda).
Nenzira imwe chete kusvikira nhasi, boka racho rinoshanda mumatare mashanu ebhizimisi muDhaibha uye kuMiddle East: Zvokudya, Real Estate, Zvivako Zvokuvakira, Kuvaka uye Zvishandiso & Infrastructure.
Mabasa muSaudi Arabia neAl Muhaidib Group.
Basa riri muArabic National Bank
Zvakakosha kugamuchira The Arab National Bank (ANB). Iyo ibhanga guru rinowanikwa muRiadadh, pasi pemamiriro acho ezvinhu, kambani inoshanyira kuSaudi Arabia. Kazhinji kutaura, kambani yakanyorwa pane Saudi Stock Exchange. Saka zviri nyore kuchengetedza kushanda. Asi iwe unogona tsvaga imwe posvo yebasa nezvebasa mune dzimwe nzvimbo shoma.
Bhuku reAnB rinopa huwandu hwekutengeserana uye kubhadhara mari yebhengi. Kusvikira panguva ino, iwe unogona kuwana basa nebhengi. Zvinhu zvose zvinofungidzirwa paunotanga basa idzva nekambani iyi. Nguva nenguva kambani yekuunganidza yevatengesi vekutengesa. Arab National Bank ine matavi e156 muSaudi Arabia. Mukana wayo mukuru kune Arab Arab, akabata 40% yemari.
Mabasa muSaudi Arabia neArabic National Bank.
Balubaid inoshandisa basa anotsvaga basa repasi rese pasi rese. Ruzhinji rwebasa revashandi veBGC vane pamusoro pe1,700 vashandi kuMiddle East. Kuzviisa neimwe nzira, kambani yakapihwa mari mu1952 pamusoro pe65 makore apfuura. Saka kana uri kutsvaga basa renguva refu. Izvi kambani yakanakira kushandiswa kune akawanda mabasa ebasa.
Nenzira dzose, Balubaid Group of Companies yakagadzirirwa kuramba ichidzidziswa mukati meimba. Inopindirana kukurudzirwa kune vashandi vekutsvaga basa. Uye kunyange izvi zvingava zvechokwadi kuSaulisation kwesangano rayo inoita kuti vashandise vashandi vatsva mwedzi woga woga.
Iboka kubhadhara vadzidzi vatsva uye vatungamiri. Kubva kunopfuura nyika dze40 dziri kuMiddle East, Africa, South Asia, Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva Asia, North America uye nekudaro, Humambo hweSaudi Arabia.
Mabasa muSaudi Arabia neBalubaid.
Bin Quraya muSaudi Arabia
Pane rimwe divi, kana uchitsvaga mazwi marefu vacancies. Tarisa muBin Quraya Boka. Iyo kambani ndeye Saudi muchivande-inobata kambani inobata. Kambani yekubata masevhisi neBQ Rental. Uye ndeimwe yemubatsiri wayo muSaudi yebhizinesi kubudirira. Iyo kambani ndiyo inotungamira inorema michina yekurejesa michina muSaudi Arabia.
Pamusoro pezvose Bin Quraya ndeimwe yezvikepe zveMiddle East zvakakura zvikuru. Ihofisi huru yekambani iri muDhahran muSaudi Arabia. Nechinangwa chekugadzira kambani. Kambani inobhadhara mukati memishonga mitsva munyika yose. Iwe unofanirwawo kushanyira vedu Dubai WhatsApp group inosangana. Nokuti vamwe vevashandi vekutsvaga vari kutumira basa rinopa kune uko.
Uyewo, unofanira kuyeuka kuti kambani iyi yakanyanya inozivikanwa muGoogle. Kunyanya nokuda kwekutsvaga avo vanoda.
Kune dzimwe sarudzo dzinoverengeka nokuda kwevashandi vemunyika dzakawanda. Mumwe wavo akadaro kuwana basa rehotera kuMiddle East. Kune dzimwezve nyika uko vanhu vangawana basa. Nyowani expats kuwana basa inopihwa zuva rega rega kubva pasi rese. Saka iwe unofanirwa funga kaviri usati wafambad. Kune rumwe rutivi, iwe unogona zvakare kutsvaga basa pane yedu Dubai WhatsApp Jobs Group. Iyo nzira yakanakisisa ndeyekushandira nzvimbo dzekugara usati waenda kuMiddle East.
Super nzira dzakakurumbira dzekuiswa mukati Emirates uye Saudi Arabia. Kazhinji kutaura ndiko shandisa shanduro yako sekushandisa mashandisi. Panguva ino vatsva vanotsvaka basa havana nguva yakakwana yokutsvaga basa. Mumakore anotevera, nzvimbo itsva dzichauya kuMiddle East. Somuenzaniso, nzvimbo yakakurumbira zvikuru kubatanidzwa ku Dubai uye Abu Dhabi. Saka iwe unofanirwa kutsvaga basa munyika dzakawanda kwete kweMabasa muSaudi Arabia.
Mabasa muSaudi Arabia - Ida uye tora basa nhasi. Kune rumwe rutivi, iwe unofanirwawo kutarisa makambani ekubhadhara munyika yose yeGulf. Tirikupa iwe a Careerjet kuunganidza musimba uye Monster injini yekutsvaga basa muUAE. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Unoda kuwana a Saudi Arabia Jobs? kunyange izvi zvingave zvechokwadi tinogona kukubatsira Iwe.
Ne Dubai City Company unogona kutanga basa idzva Saudhi Arabhiya!
Upload Resume Kunokurumidza Kukura Guta Pasi Pano! - Jobs in Riyadh
Dubai City Kambani ikozvino ichipa zvakanaka guides Mabasa muDubai. Boka redu rakafunga kuwedzera ruzivo rwemutauro wega wega wedu Dubai expats. Saka, uine izvi mupfungwa, iwe unogona ikozvino kuwana magiragi, matipi uye basa mukati Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi nemutauro wako.